Samsung Galaxy M62 yakavhurwa Iine 7,000mAh bhatiri, quad kumashure kamera
Iyo Samsung Galaxy M62 inotsigirwa ne7,000mAh bhatiri uye inotsigira 25W inokurumidza kuchaja. Samsung yakaparura chinyararire Galaxy M62 muThailand uye foni yave kunyorwa pane webhusaiti yekambani. Iwo mutengo wemitengo weSamsung Galaxy M62 haisati yaziviswa nekambani izvozvi. Samsung Galaxy M62 inouya mune imwechete 128GB yekuchengetedza sarudzo, peji rekutenga rinoratidza. Pa … [Verenga zvakawanda ...] nezve Samsung Galaxy M62 yakavhurwa Iine 7,000mAh bhatiri, quad kumashure kamera
Samsung Galaxy A02s mune yekuongorora
Iti mhoro kune Samsung Galaxy A02s, iyo yekupinda nhanho nhare ine chinangwa chekuunza yakanaka smartphone ruzivo pamutengo we €150. Iyo Galaxy A20s yakagadzirwa zvakanaka uye inonzwa zvakanaka muruoko. Iyo inouya netambo uye 15W charger, iyo yakawanda kupfuura iwe yaunowana neGalaxy S21-yakatevedzana foni mazuva ano. Tinodemba kusiiwa kwenyaya, asi pamitengo iyi hapana… [Verenga zvakawanda ...] nezve Samsung Galaxy A02s mune yekuongorora
Samsung Galaxy S21 Ultra ongororo: Imbwa yepamusoro?
Samsung yakafamba nekukurumidza kuti itange nharembozha yayo nyowani muna Ndira 2021, ine Galaxy S21 Ultra yakagara pamusoro pemurwi - pamusoro peS21 uye S21 + modhi. Mushure mekugadzira iyo Ultra tier muna 2020, iyo S21 Ultra inonzwa semukana wekugadzirisa izvo zvisina kushanda nefoni yapfuura uye kuyedza kugadzira iyo yepamusoro foni iyo Samsung - uye isu tese - tinoda. Iyo Ultra… [Verenga zvakawanda ...] nezve Samsung Galaxy S21 Ultra ongororo: Imbwa yepamusoro?
LineageOS 18.1 isina kufanira inogara pane iyo Exynos Samsung Galaxy S20 dzakateedzana
Kubva pakasvika zviri pamutemo zveApple 11, vagadziri vanobva pasirese pasirese vanga vachirova mabugs pane yavo yekuvaka michina kuitira kuti shoehorn iyo Android OS iende pane edu zvishandiso nenzira yeROM tsika. Semagariro, takaona zvisina kufanira kuvakwa kwakaburitswa kukuru, kusanganisira LineageOS 18.1, pamusoro pemhando dzakasiyana siyana dzemidziyo, iyo yazvino ... [Verenga zvakawanda ...] nezve LineageOS 18.1 isina kufanira inogara pane iyo Exynos Samsung Galaxy S20 dzakateedzana
Imwe UI 3.1 inoenda inorarama yeiyo Samsung Galaxy Fold uye Galaxy Note 10 akateedzana
Mumwe anodanana weUI, fara! Samsung yatanga kuburitsa mitsva nyowani yeGolden Fold uye iyo Galaxy Note 10 / Cherechedzo 10 Pro. Iwo matatu ndiwo ekuwedzera kuwedzerwa kune irikuramba ichikura runyorwa rwezvigadzirwa kubva kuKorea OEM iyo yakagamuchira Imwe UI 3.1. Zvekureva, iyo Galaxy Cherechedzo 10 yakateedzera yayo Android 11 gadziriso muchimiro cheOne UI 3.0 kumashure muna Zvita gore rapfuura, apa… [Verenga zvakawanda ...] nezve One UI 3.1 inoenda inorarama yeiyo Samsung Galaxy Fold uye Galaxy Note 10 akateedzana
Samsung ikozvino ichapa kusvika kumakore mana ekuchengetedzwa kwechengetedzo kumafoni ayo: Ona runyorwa
Samsung yakazivisa kuti ikozvino ichapa kusvika kumakore mana ekuchengetedza zvigadziriso kune iyo Galaxy smartphones yakatangwa mushure me2019. Izvi zvinouya mushure mekunge South Korean huru yakazivisa makore matatu ekuvandudza Android kune ayo Galaxy smartphones gore rapfuura, yaivewo yakawedzera. tichifunga nezvemakore maviri ekuvandudza kutenderera kwakateverwa kare. Verenga kuti uzive zvakawanda nezvazvo… [Verenga zvakawanda ...] nezve Samsung ikozvino ichapa kusvika kumana emakore mana ekuchengetedzwa kwechengetedzo kumafoni ayo: Ona runyorwa
Galaxy Labs app inowedzera ma module maviri kuitira kuti foni yako inzwe kutsva
Samsung's Galaxy Labs ibasa rinobatsira remamodules anobvumira vashandisi kukwirisa akasiyana maficha echishandiso chavo, kubva kukutonga kwebhatiri kusvika pakuwedzera kushanda kwemaapps. Nekuda kwekuvandudza, Galaxy Labs iri kuvandudza mashoma emamodule aya, pamwe nekuunza maviri matsva. Zvinoenderana neMapurisa eAroid, imwe yemamodule matsva anozivikanwa seMemory Guardian, ayo anobvumidza iwe ... [Verenga zvakawanda ...] nezveGlass Labs app inowedzera ma module maviri kuti foni yako irinzwe kutsva
Dzazvino Galaxy A52 kudonhedza kunozivisa zvemitengo uye ruzivo rwekuwanika
Kwemwedzi mishoma yapfuura, takaona zvakawanda zvinobuda nezve iri kuuya Galaxy A52 uye Galaxy A72. Kuburitswa kwakazivisa zvese zvakadzama nezve zvishandiso, kusanganisira chokwadi chekuti Samsung ichapa ese ari maviri 4G uye 5G akasiyana mafoni ese. Kunyangwe Samsung ichiri isati yaburitsa chero ruzivo rwepamutemo, mitengo uye ruzivo rwekuwanikwa kune ese ari maviri Galaxy A52 akasiyana… [Verenga zvakawanda ...] nezve Yekupedzisira Galaxy A52 kudonhedza kunozivisa zvemitengo uye ruzivo rwekuwanika
Samsung Galaxy M02s Ongororo: Akadzikama zuva nezuva mutyairi webhajeti-anoziva
Samsung, sezvatinoziva tese, yakave nekuvapo muchikamu chebhajeti che smartphone kwechinguva ikozvino. Iyo yeSouth Korea tech hombe yauya neyakatevedzana yeGalaxy M kukwikwidza nevakwikwidzi vakasimba vakaita seXiaomi neRealme. Nechinangwa chimwe chete, Samsung nguva pfupi yadarika yakatanga maGlass M02s nevavariro iri nyore: 'Max Up' specs yepasi pe10K. Iyo Samsung Galaxy M02s inounza vaviri… [Verenga zvakawanda ...] nezve Samsung Galaxy M02s Ongororo: Anodzikama zuva nezuva mutyairi webhajeti-anoziva